Waxaa baadhis iyo dabo gal u baahan liisamada iyo xaqul qalinkii 18-ka shirkadood ee dalka batrolka iyo macdanta ka baadha. | Berberatoday.com
Mudadii xukuumadii dhacday ee Kulmiye ay dalka hagaysay waxay liisamo siisay ilaa iyo 18 shirkadood oo kala ah kuwa shidaalka iyo macadanta baadhawaxaana ay shirkadahaasi dhul baaxad leh u qaybsadeed xidhmo xidhmo ama ( Block by Block ) sida caadiga ah marka shirkadaha liisan la siiyo waxay bixiyaan lacagta xaqal qalinka ah ee loo yaqaan ( Bonus Money ) taas oo badhkeed loogu talo galay in degaanada baadhitaanku ka socdo lagu horumariyo oo wax loogu qabto oo dib logu celiyo taasina Somaliland marna kamay dhicin oo lacagihii shirkadahaa laga qaaday iyo liisamadii shirkadaha la siiyey hayadihii ku shaqada lahaa sida Baarlamaanka warkooda ma hayaan sidaa daraadeed waxaa Hanti dhowrka guud u baahan yahay in uu helo xogta shirkadahaa oo sugan.
Shirkada Genel Energy waxay qiratey 2013 kii in ay ilaa iyo $ 45 million doolar dib ugu celineyso Degaanadii ay boodhka ku liqday ee ay Shidaalka ka baadheysey. ilaa iyo mudadii dheereyd ee Wasiirkii madhace uu wasaaradda Macdanta iyo Tamarta uu xuurtada ku haystay waxa uu qirtay in uu $5 Millionoo dollar oo keliya uu khasnada dawlada ku shubay.waxaase laysku raacay in lacagta la lunsaday ay ka badan tahay lacagtaa uu qirtay in uu khasnada ku shubay.
Hadii ay ka dhab tahay in Madaxweyne Muse biixi Abdi in uu la dagaalamayo musuq-maasuqa iyo ku tagri falka illaha dhaqaalaha iyo hantida maguuraanka ah ee qaranka, Hadii uu doonaayo in uu shiishka la helo horumarka buugiisa cagaaran ku qoran. Hadii uu doonaayo in uu jiho cusub u jeexo dawladiisa cusub kana dhabeeyo balanqaadyadiisa tirada badnaa ee uu codka iyo cuudkaba shacabka kaga helay. hadii ay ka go’an tahay in uu guulo deg-deg ah gaadho waa in uu musuq-maasuqa xididada u siibaa dibna loo soo celiyaa hantidii guurtada iyo maguuraanka aheyd ee ummadda laga dhacay. Hadii kale waxaa sii bacrimi doona musuq-maasuqii, maamul-xumadii iyo xilkasnimodaradii xukuumada kulmiye lagu yaqaanay.
Waxaab qormadan ku soo garoocayaa ” Anigu Daaha kama rogin ee dadkuba wuu Arkaayaa ” !
La soco qaybaha danbe …….. !